Iraan hojii misaa’elaa cimsitee akka itti-fuftu beeksifte
Friday, 26 May 2017 13:13
Finfinnee, Caamsaa 18, 2009 (oromiapo) Iraan hojii misaa’ela hojjachuu fi hammayyeessuu caalaa cimsitee itti-fufuuf kutattuu ta’uushee Ministeerri Dhimma Alaa Biyyaattii beeksise.
Ministirri Dhimma Alaa Ameerikaa Reeks Tiilarsan Pireezdaantii Iraan haaraa filataman Hasan Ruhaanii biyyisaanii yaalii ittisa misaa’elaa akka addaan kuttu gaafachuusaaniin wal-qabtee Dubbi-himaan Ministeera Dhimma Alaa Iraan Baahiraam Qaasim Teehiraan hojilee misaa’elaa caalaa cimsitee akka hojjattudha kan ibsan.
Qondaaltonni Iraan sagantaalee misaa’elaa biyyattii irratti yaadaonni kennaman fudhatama hin-qaban jechaa jiru.
Dubbi Himaan kun hojiin misaa’elaa dhimma biyya keessaa waan ta’eef eenyuyyuu gidduu seenuu hin-barbaachisu jedhaniiru.
Misaa’eloonni Iraan hojjattu nageenya biyyattii eegsisuu irra darbee nagaa naannichaaf barbaachisaa waan ta’eef sagantaashee irraa eenyuyyuu akka ishee dhorkine beeksifteetti.
Madda: TV Pireesii (FBC)
More in this category: « Muummichi Ministiraa Awustiraaliyaa Toonii Aboot aangoorra haturani ykn haa bu’ani torban dhufu murtaa’a Tuuniiziyaatti Namoonni 32 shoroorkeessitoota jedhaman too’ataman »
Torbe Kana 144030
Ji'a Kana 245953
01/05/07 irraa eggalee 6834114
Kan Amma Daawwachaa Jiran 193